Amanyathelo okhuseleko iwelding of stainless steel khazi - China Foshan Hermes Steel
Amanyathelo othintelo nge welding of stainless steel khazi intsimbi
Ipleyiti yentsimbi engenanto yenziwe ngeentlobo ezimbini zeepleyiti zensimbi, kubandakanya ukubopha (intsimbi engenasici) kunye nocingo lwesiseko (ikharbon yentsimbi, intsimbi ephantsi). Kuba kukho izinto ezimbini ezisisiseko zentsimbi ye-pearlite kunye ne-austenitic yesinyithi xa kusenziwa iwelding yentsimbi enxibe isinyithi, i-welding yeplati yentsimbi enxibe iyeyeyokunyibilikisa intsimbi engafaniyo. Ke ngoko, amanyathelo ahambelanayo enkqubo kufuneka athathwe ngexesha lenkqubo yokuwelda ukuze angahlangabezani kuphela neemfuno zamandla esakhiwo sentsimbi, kodwa nokuqinisekisa ukumelana nokubola. Ukuba utyando alufanelekanga, luya kuba neziphumo ezibi. Amanyathelo okhuseleko ngexesha le-welding ngala alandelayo:
1, uhlobo olufanayo lokuwelda ngentonga alunakusetyenziselwa ukucheba izinto zentsimbi edityanisiweyo. Kwizinto ezenziwe ngentsimbi edityanisiweyo, kufuneka kuhlangatyezwane neemfuno zamandla esakhelo sesiseko kunye nokuqinisekisa ukumelana nokubola. Ke ngoko, i-welding ye-stainless steel clad ine-specificity yayo. Umaleko wesiseko kunye nongqameko lwesiseko kufuneka zidityaniswe ngentsimbi yekhabhoni kunye ne-alloy electrode yentsimbi ehambelana nezinto zesiseko, ezinje nge-E4303, E4315, E5003, E5015, njl .; Uluhlu lokwaleka, ukunyuka kwekhabhoni kufuneka kuthintelwe. Ngenxa yokuba ukwanda kwekhabhoni ye-weld kuya kunciphisa kakhulu ukumelana nokubola kwezinto zensimbi ezingenasici. Ke ngoko, i-welding ye-cladding kunye ne-cladding kufuneka ikhethe i-electrode ehambelana nezinto zokubopha, ezinje nge-A132 / A137, njl. ukuwelda komaleko wotshintsho kwindawo yokudibanisa isiseko kunye nokubotshwa kufuneka kunciphise ifuthe lekhabhoni yentsimbi kulwakhiwo lwensimbi olungenasici kwaye yongeze inkqubo yokuwelda Ukutshiswa kwelahleko yokwakheka kwengxubevange. Cr25Ni13 okanye Cr23Ni12Mo2 uhlobo electrode chromium eliphezulu kunye nomxholo nickel ingasetyenziswa, ezifana A302 / A307.
2. Kwiintsimbi ezityhidiweyo ezingenazintsimbi zilingene ipleyiti yentsimbi, udini olungalunganga akufuneki lugqithe kwixabiso elifanelekileyo (1mm). Amacwecwe esinyithi eentsimbi avalwe ngesiqhelo aqulathe umaleko wesiseko kunye nophahla lokugquma ngobunzima be-1.5 ukuya kwi-6.0 mm kuphela. Ukuthathela ingqalelo ukuba ukongeza ekwaneliseni iipropathi zoomatshini beekhomponenti, izinto zentsimbi ezidityanisiweyo ezingenanto nazo kufuneka ziqinisekise ukumelana nokubola komdibaniso onxibelelana nomphakathi onwabulayo. Ke ngoko, xa kuqokelelwa i-weldment, kufuneka kulungelelaniswe umaleko wokubopha njengesiseko, kwaye umda womaleko wokubopha awugqithi kwi-1mm. Oku kubaluleke ngakumbi xa kudityaniswa iipleyiti zentsimbi ezinxibe iityhubhu ezinobungakanani obahlukeneyo. Ukuba ukungalungelelani phakathi kwamanqanaba okubopha kukhulu kakhulu, i-weld kwingcambu yesiseko sonyibilikisi inokunyibilikisa ezinye zentsimbi engenasici, nto leyo eyonyusa izinto ze-alloy zesinyithi ezingcanjini zesiseko sombane, ibangele ukuba i-weld Inzima kwaye iyaphuka, kwaye kwangaxeshanye, intsimbi engenasici kwilungu le-butt iyacuthwa. Ukutyeba kuya kunciphisa ubomi benkonzo, kuchaphazele umgangatho we-cladding layer, kwaye kunzima ukuqinisekisa ukumelana nokubola kwesakhiwo esitshiweyo.
3, akuvumelekanga kwaphela ukuwelda umaleko wotshintsho okanye ukuwelda okubopha intsimbi engenasici kunye nezinto zokuwelda zesingxobo sesiseko se-welding: ngaxeshanye, thintela izinto zokufakela i-cladding ekusetyenzisweni gwenxa kumthungo we-welding we-welding transition yoleyile kunye umaleko wesiseko.
4. Xa isiseko sokudibanisa izinto sisetyenziselwa ukuhambisa umaleko kwicala lokubopha, isisombululo setshokhwe kufuneka sibotshwe ngaphakathi kwe-150mm kumacala omabini omjelo ukuyikhusela ukuthintela isiseko se-nugget ebonakalayo ekuncamatheni kumphezulu wesinyithi. Ngexesha lenkqubo ye-welding. Ifilimu ye-oxide kumphezulu ichaphazela ukumelana nokubola kwentsimbi edityanisiweyo. Gcoba amasuntswana athe ngqo kufuneka acocwe ngononophelo.
5. I-weld welding ye-base layer isebenzisa i-electrode arc welding. Ukunciphisa uxinzelelo lwezinto ze-alloy phantsi kwemeko yokuqinisekisa ukungena, umyinge we-fusion kufuneka uncitshiswe. Ngeli xesha, i-welding encinci kunye nesantya se-welding esheshayo sinokusetyenziswa. Vumela ukujikeleza okulandelayo. I-welding ye-cladding kufuneka ikhethe i-welding encinci yokufaka ubushushu, ukuze ixesha lokuhlala kubushushu obuyingozi (i-450 ~ 850 ℃) indawo ifutshane kangangoko. Emva kwentsimbi, amanzi abandayo angasetyenziselwa ukupholisa ngokukhawuleza.
I-6, ukuba i-stainless steel clad ifunyenwe ineziphene ze-delamination ngaphambi kwe-welding, i-welding ayivunyelwe. I-delamination kufuneka isuswe kuqala, kulungiswe i-welding (okt, i-overlay welding), kunye ne-welding emva kokulungiswa.
7. Izixhobo ezikhethekileyo mazisetyenziselwe ukucoca isiseko somaleko kunye namacala omabini okubopha. Isiseko somaleko kufuneka sisebenzise iibrashi zentsimbi zecarbon, kwaye ukugoba makusebenzise iibrashi zentsimbi ezingenacici.